यसरी छुट्याउन सकिन्छ महाकालीको नक्कली र सक्कली मुहान ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार यसरी छुट्याउन सकिन्छ महाकालीको नक्कली र सक्कली मुहान !
२०७६, २८ कार्तिक बिहीबार १९:३१
भारतले कब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता पाउन सबैभन्दा पहिले महाकाली नदीको मुहान यकिन गरिनुपर्छ । भारतले नक्कली महाकाली(काली) नदी खडा गरी त्यसलाई नेपालको सीमा हो भन्दै बखेडा झिकेकाले पनि सबैभन्दा पहिले काली नदीको मुहान यकिन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
भारतले महाकाली नदीको मुहानमा विवाद झिक्दै नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक कब्जामा राख्दै आएको छ । सन् १८५६ को आफ्नै नक्सालाई बदलेर कहिले लिपु खोला त कहिले तिंकर भञ्ज्याङतर्फ भारतले सीमा सारिरहेको छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि लिपुखोलाभन्दा अझ पूर्वतर्फ कालापानीमा बनाएको सैनिक क्याम्प नजिकै रसाएको पानीलाई नै कालीको मुहान भन्ने भारतले धृष्टता गरेको छ । (ऋषिराज लुम्साली–मूल्याङ्कन, साउन २०५५)
भारतले ती क्षेत्र कब्जामा राखेको मात्रै नभई पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामै समेटेको छ । पछिल्लो पटक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभागसमेत राखेपछि भारतसँगको सीमा विवाद सतहमा देखिन आएको हो । भारतले वर्षौँ पहिले महाकाली नदीको मुहान कुटी याङ्दी नभई कालापानी तर्फबाट आउने तिरतिरे पानी बगेको लिपु खोलालाई नक्कली काली नदीको मुहान बनाएर त्यसअघिका भूभाग कब्जामा लिँदै आएको हो ।
अहिले भारतले त्यसैको फाइदा उठाउँदै नक्कली कालीको मुहान बनाएर सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको नेपाली भूभाग आफ्नो कब्जामा राख्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यो बेला सीमा निर्धारणको वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा नगरिँदा काली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने बारे आजसम्म मतान्तर देखिँदै आएको छ। नेपाल भारतबीच बनेको संयुक्त सीमा अध्ययन कार्यदल पनि मुहान कुन हो भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
कुनै पनि नदीको मुहान पत्ता लगाउने प्रभावकारी उपाय भनेकै सम्बन्धित नदीको हाइड्रोलोजिकल अध्ययन भएको विज्ञहरु बताउँछन् । महाकालीको मुहान पत्ता लगाउन पनि संसारभर प्रचलनमा रहेको यही विधि प्रयोग गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । वरिष्ठ हाइड्रोलोजिष्ट जगत भुषाल हाइड्रोलोजिकल अध्ययनमार्फत कुनै पनि नदीको मुहान पत्ता लगाउन सकिने बताउनुहुन्छ ।
नदीको लम्बाइ, जलाधारक्षेत्र र पानीको मात्राको हिसाबले लिम्पियाधुराबाट निस्कने खोला नै महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो भन्ने तथ्यलाई अन्य कुनै प्रमाणको आधारमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । कुन नदी मूल नदी हो भनेर छुट्याउँदा नदीको लम्बाइ नाप गर्ने बेलामा सुरुको बिन्दुबाट नदीको बीच धारैधार नदीको मुहानसम्म नाप लिनुपर्ने भुषाल बताउनुहुन्छ ।
जलस्रोत विज्ञानको हिसाबले भारतले खडा गरेको लिपुलेकबाट निस्केको नक्कली काली नदी कालीको मुहान नभई लिम्पियाधुराबाटै निस्कने कुटीयाङ्दी नै महाकालीको मुहान हो भन्ने प्रमाणित हुने वरिष्ठ हाइड्रोलोजिष्ट जगत भुषाल बताउनुहुन्छ । तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया सरकारले सन् १८३९ मा काेलकाताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको प्रस्ट पार्दै लिम्पियाधुरालाई नेपाल, भारत र चीनको स्थिति अंकित गरिएको थियो । यस्तै १८५६ मा सर्भे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सामा गुंजीको भागबाट दुवैतर्फ उत्तर पश्चिमपट्टिबाट बगिआएको नदीलाई प्रस्ट रुपमा काली नदी भनी देखाइएको थियो । उज्यालो अनलाईनबाट
Previous articleबेहुलाबेहुलीलाई चार लाख रुपैयाँको नोटको माला
Next articleबुद्ध एकेडेमीको पुननिर्माणका लागि साढे दुईलाख बढि सहयोग